Mutare | definition of Mutare by Medical dictionary
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary 10,833,516,126 visitors served
(redirected from Mutare)
Mr Munjanja as part of resuscitating operations at the Mutare factory said that the company is considering sourcing a new jam manufacturing plant from China, France or Italy.
Zimbabwe : EXPORTS after factory upgrade started again by Cairns Foods
Marshall Munhumumwe and Never Mutare were original members of Mapfumo's Blacks Unlimited before they formed The Four Brothers.
Four Brothers, two tragedies and a gig; Twice struck by disaster in the last four years, Zimbabwean band the Four Brothers returns to Birmingham this weekend. Martin Longley reports
The new rail route would also provide a shorter rail route for passenger traffic ex-southern /midlands provinces through Gweru/Mvuma section with a new link through Chivhu-Dorowa /Mpandawana, Save north areas to Pounsley then Mutare.
Mvuma-Pounseley/Mutare Railway Line
The project entails construction of a direct railway line from Mutare to triangle/Chiredzi, thereby providing a rail transportation corridor for agricultural produce (sugar cane, maize, fruits etc) from Mkwasine, Mwenezana, Triangle estates, Middle and Upper Save to the eastern border town of Mutare going further to Beira in Mozambique.
Mkwasine to Mutare Railway Line
The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) is working to secure Private Public Partnerships (PPPs) for Mutare and Masvingo city council to allow them to start exploiting methane gas as an alternative energy source.
Zimbabwe : ZERA works to secure PPPs to start exploiting methane as alternative energy source
2 billion diesel and gas emergency power project in Mutare.
China,Zimbabwe : CHINA GEZHOUBA expresses its interest to invest $1.2 billion in an energy power project in MUTARE, ZIMBABWE
company, today announced that Mutare, an independent software developer and systems integrator with a large healthcare customer base, has integrated the Zang communication platform-as-a-service (CPaaS) to enable its exciting new business-grade text messaging solution Enterprise Text.
United States : Avaya and its Zang Cloud Platform Help Mutare Bring Next-level Text Messaging to the Enterprise
Kenya stumbled towards another series defeat as they lost the second One Day International (ODI) match to host Zimbabwe 'A' by 110-run 'Duckworth-Lewis' method at Mutare Sports Club.
Kenyans fall again :Maruma, Masvaure score half-centuries apiece to inspire Zims to their second successive series win
However, the backdrop for the biggest stand-off between the coach and captain in Indian cricket more than a decade back couldn't be more stark in contrast - the sleepy backdrop of Mutare in Zimbabwe.
He was not the same Chappell in Zimbabwe in 2005: Ganguly
2- Eating sadza with Liberty and his friend- Madnomad Blog In Mutare I met another friend of Blessing.
You've got mail, in Zimbabwe!
InterContinental Hotels Group (IHG) has opened a new Holiday Inn in Mutare, Zimbabwe.
The franchised property, owned by African Sun, is the third collaboration between IHG and the hotel owner